ABUURITAANKA BADEECOOYINKA BEERAHA EE UKRAINE EE SANADKA AYAA KOR U KACAY QIIMAHA KU DHOWAAD 14% - UKRAINE
Qiimaha wax-soo-saarka dalaggu wuxuu kordhay 10.6%, iyo wax soo saarka xoolaha - 20.9%. Sida laga soo xigtay qiyaasaha adeegga tirakoobka ee degmooyinka, qiimaha wax soosaarka beeraha ee sannadka 2016 wuxuu kor u kacay 13.5% marka la barbardhigo 2015.
Gaar ahaan, kharashyada wadajirka ah ee soo saarka beeraha ayaa kordhay 10.6%, iyo wax soo saarka xoolaha - 20.9%. Guddiga Tirakoobka Gobolka wuxuu caddeeyey in qadarka kharashka ee khayraadka iyo farsamada ee asalka warshadaha, ee loo isticmaalo wax soosaarka beeraha, uu kordhay 4.2% sanadkii hore. Laakiin marka la barbardhigo bishii Nofembar, qiimaha beeraha ayaa kor u kacay 2.3%. Kharashka abuurista badeecadaha dhirta ee bishii Diseembar ayaa kordhay 2.4%, iyo xayawaanka - boqolkiiba 1,9%.
Intaa waxa dheer, beeralaydu waxay kordhiyeen kharashka qalabka iyo farsamada ee warshadaynta ilaa 1.8%. Marka la barbardhigo 2014, 2015, qiimaha wax soo saarka beeraha ee Ukraine kor u kacay by 50.9%.